ဂိုလျော - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂိုလျော သို့မဟုတ် ကိုလျော (ကိုရီးယား: 고려; "高麗") သည် ၉၁၈ ခုတွင် တည်ထောင်သော ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သုံးပြည်ထောင်ခေတ်နောက်ပိုင်းတွင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင် သိမ်းရုံးအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့မှာ ၁၃၉၂ ခုအထိပင်တည်း။  "ကိုရီးယား"ဟူသော ဝေါဟာရမှာ ဂိုလျော၏စာလုံးပေါင်း ကိုလျို (Koryŏ) မှလာပြီး ၅ ရာစုအစောပိုင်းတွင် ဂိုဂူလျောနိုင်ငံ (သုံးပြည်ထောင်ခေတ်တွင် မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံ) က စတင်သုံးစွဲသည်။ 
၁၁၇၀ ပြည့်တွင် ဂိုလျောကိုအုပ်ချုပ်သည်မှာ ချိုမျိုးနွယ် ဖြစ်သည်။  ယင်းသို့အုပ်ချုပ်စဉ် ဂိုလျောသည် မွန်ဂိုအင်ပါယာ၏ကျူးကျော်မှုကို နှစ် ၃၀ မျှ ခံရ၏။ ၁၂၅၈ ခုတွင် အတိုက်အခံမျိုးနွယ်မှ ချိုမျိုးနွယ်တို့ကို လုပ်ကြံပြီးနောက် မွန်ဂိုတို့နှင့် မဟာမိတ်ပြုကာ နိုင်ငံအား ငြိမ်းချမ်းစေသည်။ သို့သော် ဦးဆောင်မည့်မျိုးနွယ်မှာ ၁၂၇၀ ပြည့်အထိပင် အဖြေမပေါ်ဖြစ်နေသည်။ ထိုကာလတွင် ဂိုလျောသည် သမီးပေးသားယူပြုကာ မွန်ဂိုတို့ ယွမ်မင်းဆက်၏ ဩဇာခံအဖြစ် နေခဲ့၏။ ၁၄ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် ဂုန်မင် (ခုံမင်) က လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်ဖြစ်အောင် ပြန်ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ နောက် မြောက်ဘက် တရုပ်မှ ခေါင်းပေါင်းနီတပ်ကို၎င်း တောင်ဘက် ဂျပန်မှ ဝူကူ (ဂျပန် ပင်လယ်ဓားပြ) ကို၎င်း ဗိုလ်ချုပ် ချိုယောင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ် လီဆောင်ဂယ်တို့က တိုက်ထုတ်အောင်ပွဲဆင်နိုင်သည်။  ၁၃၈၈ ခုတွင် လီဆောင်ဂယ်ကို မင်မင်းဆက်မြေ လျောင်တုံနယ်ကို ကျူးကျော်ရန်လွှတ်ရာ ချိုယောင်ကို လုပ်ကြံ၍ အာဏာသိမ်းသည်။ ၁၃၉၂ ခုတွင် ဂိုလျောမင်းဆက်ကို ဖြုတ်ချကာ ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်ကို ထောင်သည်နောက် သက်တမ်း ၄၇၄ နှစ်ကြာရှိခဲ့သော ဂိုလျောမင်းဆက် နိဋ္ဌိတံသည်။7ရာစုနှောင်းပိုင်းကတည်းက ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့သော တစ်ချိန်က သာယာဝပြောသော Silla ၏နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုများကြောင့်9ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် စတင်ပြိုကွဲခဲ့ပြီး သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် လူသိများသော Baekje နှင့် Goguryeo ရှေးဟောင်းပြည်နယ်များ ပြန်လည်နိုးထလာစေရန်၊ "နောက်ပိုင်း Baekje" နှင့် "Taebong" အဖြစ်။ နောက်ပိုင်းတွင် Taebong ဟုလည်းလူသိများသော Goguryeo သည် 918 ခုနှစ်တွင် Goryeo ကို ၎င်း၏နေရာတွင် ထူထောင်ခဲ့သော မြင့်မြတ်သော Goguryeo မျိုးနွယ်၏ ထင်ရှားသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Wang Geon မှ ဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည်။ Goryeo သည် 935 တွင် နောက်ပိုင်း Silla ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး 936 တွင် နောက်ပိုင်းတွင် Baekje ကို စစ်ရေးအရ သိမ်းပိုက်ကာ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ 993 ခုနှစ်အစတွင် Goryeo သည် မြောက်ဘက်တွင် အင်အားကြီးသော ခြေသလုံးအင်ပါယာဖြစ်သည့် Khitan ဦးဆောင်သော လျောင်မင်းဆက်၏ ကျူးကျော်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော်လည်း 1019 ခုနှစ်တွင် Khitans များကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသော စစ်ရေးအောင်ပွဲကြောင့် Goryeo သည် ၎င်း၏ရွှေခေတ်ထဲသို့ ရာစုနှစ်တစ်ခုခန့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။  ဤကာလအတွင်း၊ Goryeo၊ Liao နှင့် Song မင်းဆက်များကြား အရှေ့အာရှတွင် အာဏာချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဂိုလျောခေတ်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ "ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ရွှေခေတ်" ဖြစ်ပြီး  နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကိုရီးယားသမိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံးလွှမ်းမိုးမှုအဆင့်ကို ရရှိခဲ့ပြီး ၁၁ ရာစုတွင် မြို့တော်တစ်ခုတည်းတွင် ဘုရားကျောင်းပေါင်း ၇၀ နှင့် ဘုရားကျောင်းပေါင်း ၇၀ ရှိသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ကုန်သည်များဖြင့် ဂိုလျောတွင် ကုန်သွယ်မှုများ ထွန်းကားလာခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ Kaesong သည် ကုန်သွယ်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း ဗဟိုချက် ဖြစ်ခဲ့ကာ ကုန်သည်များသည် ၁၁ ရာစု သို့မဟုတ် ၁၂ ရာစုကတည်းက နှစ်ကြိမ်စာရင်းရေးသွင်းမှုစနစ်ကို စတင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဂိုလျောသည် ဆောင်းမင်းဆက်တွင် အလွန်ချီးကျူးခံရသော Koryŏ celadon ကဲ့သို့သော ကိုရီးယားအနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတွင် ကြီးကျယ်သောအောင်မြင်မှုများရရှိသော ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ "ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူဝါဒဆိုင်ရာ ကျမ်းဂန်များ၏ အရေးအပါဆုံးနှင့် အပြည့်စုံဆုံးသော ရုပ်ပုံလွှာ"ဟု ယူနက်စကိုက ဖော်ပြညွှန်းဆိုထားသည့် ကိုရီးယား တိပိဋက သည် ထွင်းထုထားသည့် မူရင်းပုံနှိပ်တုံး ၈၁,၂၅၈ သည် ယျနေ့တိုင်အောင် Haeinsa ဘုရားကျောင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ၁၃ ရာစုအစောပိုင်းတွင် ဂိုလျော သည် ဥရောပရှိ Johannes Gutenberg မတိုင်မီနှစ် ၂၀၀ ခန့်စော၍ စာအုပ်များပုံနှိပ်ရန်အတွက် သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအမျိုးအစားကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
↑ " Koryŏ dynasty | Korean history". Encyclopedia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc.
↑ " content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16444560035762132494257.png 고려". 문화콘텐츠닷컴 (in Korean). Korea Creative Contents Agency.
↑ Kim, Jinwung (2012), A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict, Indiana University Press, ISBN 9780253000248
↑ 이정완; 최효성 (2015). 만만한 취업 한국사: 국내 주요 기업 입사대비 최단기 한국사 마스터북 (in Korean). 박문각. p. 165. ISBN 978-9791170239.
↑ Johnston၊ William M. (2013)။ Encyclopedia of Monasticism (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Routledge။ p. 275။ ISBN 9781136787157။
↑ Kim 2012, p. 148.
↑ Till၊ Geoffrey; Bratton၊ Patrick (2012)။ Sea Power and the Asia-Pacific: The Triumph of Neptune? (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Routledge။ p. 145။ ISBN 9781136627248။ 8 February 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee 2017, p. 52.
↑ Ronald၊ Ma (1997)။ Financial Reporting in the Pacific Asia Region (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ World Scientific။ p. 239။ ISBN 9789814497626။ 8 February 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Korea, 1000–1400 A.D.။ The Metropolitan Museum of Art။
↑ Chung 1998, p. 234.
↑ Inscription: Haeinsa Temple Changgyong P'ango, the Depositories for the Koreana Woodblocks (Republic of Korea) (in en)။ United Nations။
↑ Korean Classics။ Library of Congress။
↑ Gutenberg Bible။ British Library။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂိုလျော&oldid=735067" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။